Augustin Andriamananoro fa misy fanehoan-kevitra malalaka eto Madagasikara. Isaorana ny fitondram-panjakana satria zo fototra izany. Manana praograma ny fitondram-panjakana sy ny minisitera, hoy hatrany ny tenany, hanavao ireny vakoka ireny mba ho toerana mirakitra tantara holovain’ny taranaka faramandimby. Adidintsika izany. Tsy rehefa hitazam-potsiny isika na tsy handray andraikitra dia hisy fivoarana ny zava-misy fa mila fandraisana andraikitra. Ao anatin’ny fanajana ny soatoavina sy kolontsaina, hoy izy. Adala daholo izany ireo mpahay tantara, mpahay vakoka sy kolontsaina na mpandala fomban-drazana ihany koa izay mitabataba ankehitriny fa tsy voahaja izay sotoavina sy kolontsaina izay raha mikasika ity resaka fikitihana vakoka etsy sy eroa ity ?